हामी किन थोरै सकारात्मक ?::Hamro Koshi Awaj / awaz
अझ सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक र आक्रोशित किन ?
नेपाली समाजमा नकारात्मक सोचले जरा गाडेको छ । फलानाले राम्रो लगायो, मिठो खायो भनेर अरुको रिस–डाह गर्ने, आफ्नै जीवनसँग गुनासो, असन्तुष्टि राख्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्ता असन्तुष्टिले जीवनमा उदासीपन एवं निराशा उत्पन्न हुन्छ र विस्तारै नकारात्मक सोचको विकास हुन्छ।मानिसको दिमागमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै विचार आउँछन् ।
जो मानिसले नकारात्मक कुरालाई सकारात्मकमा परिवर्तन गर्छन् उनीहरुले जीवनमा उन्नति, प्रगति गर्छन् । जो मानिसले जीवनमा नकारात्मक भावनालाई हावी हुन दिन्छन्, उनीहरुलाई विभिन्न मानसिक तथा शारीरिक रोगले आक्रमण गर्छन् । नकारात्मक सोचाइले वरिपरिको वातावरण नै नकारात्मक बनाउँछ । नकारात्मक सोच्ने व्यक्तिले सकारात्मक कुरालाई पनि नकारात्मक तरिकाले हेर्ने गर्छन् । नकारात्मक सोचले गर्दा विभिन्न खालका मानसिक समस्या उत्पन्न हुनुका साथै दिर्घरोग बढाउँछ ।
सामाजिक सञ्जालमा आखिर किन नकारात्मक मनोवृत्ति देखिन्छ ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय मनोविज्ञान विभागका प्राध्यापक डाक्टर शिशिर सुब्बा सञ्चारका अधिकांश माध्यमले सकारात्मक खबरको तुलनामा नकारात्मक सामग्रीलाई प्रोत्साहन गर्ने हुँदा सर्वसाधारणले पनि त्यसैमा बढी विमर्श गर्ने बताउँछन् ।
‘मानिसले जे सुन्यो त्यही विषयमा कुरा गर्ने हो’, सुब्बाले भने, ‘र यो नेपालको मात्र हैन विश्वव्यापी रूपमै देखिएको समस्या हो ।’
हाम्रो समाजमा व्याप्त नकारात्मक प्रभाव नै हो । यसले मानिसलाई निराश बनाएको छ । सामाजिक सञ्जालबारे निश्चित सीमा नहुने हुँदा पनि नकारात्मक कुरा चाँडो फैलिने गरेको उनको बुझाइ छ । त्यसो त सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक बहस हुँदै नहुने भने होइन । कुनै पनि किसिमको प्राकृतिक विपत्ति होस वा नेपाली खेलाडी वा टोलीको प्रदर्शन होस् सामाजिक सञ्जालमा त्यसबारे सकारात्मक विमर्श हुने गरेको पाइन्छ । तर त्यस्ता किसिमका घटना परिघटना सकिनासाथ फेरि तिनै मुद्दामा नकारात्मक टीकाटिप्पणी सुरु हुने गरेको देखिन्छ । ‘कुरा घुमिफिरी फेरि राजनीतिमै जोडिन आउँछ’, सुब्बाले थपे ।
प्राडा सुदर्शन नरसिंह प्रधानका अनुसार नेपाली समाजमा पनि यसले जरो गाडेको छ नै । मन खिन्न हुने, उदास हुने, नरमाइलो लाग्ने, रमाइलो कुरामा खासै रुचि नहुने, आफूले जीवनमा केही गर्न सक्दिनँ भन्ने सोच्ने, जीवन व्यर्थ लाग्ने व्यक्तिलाई डिप्रेसन निम्तिने गर्छ । अरुले के भन्लान्, मेरो कुरा काट्दै छन् कि भनेर शंका गर्ने, मलाई मार्ने षड्यन्त्र रचेका छन् कि भन्ने शंका गर्ने नकारात्मक सोचाइ हुन् । यस्ता सोचाइले मान्छेलाई हिंस्रक बनाउँछ । मन आत्तिने, अग्लो ठाउँमा जान डराउने, लिफ्ट चड्न डराउने, लिफ्ट चढ्दा श्वास थुनिएको जस्तो हुने, बन्द कोठामा बस्न डराउने नकारात्मक सोचका परिणाम हुन् ।
एक पटक नकारात्मक सोचाइ आयो भने त्यसलाई मनबाट निकाल्न निकै गाह्रो हुन्छ । यदि बेलैमा मनलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने नकारात्मक सोच बढ्दै जान्छ । नकारात्मक सोच आउनुको मुख्य कारण मानिस कस्तो वातावरणमा हुर्केको छ, त्यसमा भर पर्छ । मानसिक विकास हुने क्रममा बच्चाको मनमा नकारात्मक सोचमात्र परेको छ भने त्यो मानिसलाई जीवनभरि नै नकारात्मक सोचले दुःख दिन्छ ।
बच्चा हुर्काउने बेलामा यो गर्नु हुन्छ, त्यो गर्नु हुँदैन भनेर रोकतोक गर्दा पनि बच्चामा नकारात्मक सोचको विकास हुन्छ, बाबुआमामा नकारात्मक सोचाइ छ भने पनि बच्चामा यस्तो समस्या देखिन्छ, बच्चालाई तर्साएर राख्दा बच्चामा नकारात्मक सोचको विकास हुन्छ, यसले केही गर्न सक्दैन भनेर अगाडि बढ्न नदिँदा पनि बच्चाको आत्मविश्वास कम हँुँदैजान्छ र नकारात्मक सोचको विकास हुन्छ, शारीरीक विकास हुने क्रममा पनि दिमागमा हुने रसायन तत्वको गडबढीले नकारात्मक सोच आउने गर्छ, नकारात्मक सोचले गर्दा आत्मविश्वास हराउँदै जाने, आफूलाई कमजोर सोच्ने, केही गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्ने, बोल्न डराउने, निराश हुने जस्ता लक्षण देखिन्छन् ।
नकारात्मक भावनाको विकास हुनुमा अरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । नकारात्मक सोचाइ र विचारलाई सकारात्मकमा परिवर्तन गर्न सकियो भने जीवनमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । सकारात्मक सोचले केही गर्ने ऊर्जा प्रदान गर्छ भने नकारात्मक सोचले जीवनमा निराशा प्रदान गर्नुका साथै असफलता निम्त्याउँछ र जीवनमा आउने ऊर्जालाई नष्ट गरिदिन्छ । बारम्बार नकारात्मक सोचाइ आउँछ भने योग, ध्यान गर्ने, शान्त वातावरणमा आँखा बन्द गरेर बस्ने गर्नाले विस्तारै नकारात्मक सोचाइ हट्दै जान्छ ।
–बिबिसी र एजेन्सीमार्फत्